Umzi-mveliso weSixhobo oShicileleyo woVavanyo-uMba-eTshayina oShicileleyo abavelisi bezixhobo, ababoneleli
I-SP series X-Rite spectrophotometer ithatha iteknoloji yamva nje kunye neyona ichaneke kakhulu yokulawula umbala namhlanje.Isixhobo sidibanisa imisebenzi eyahlukeneyo yokulinganisa umbala kunye nokusebenza okuphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu, ukuqinisekisa ukuba ufikelela kwixabiso elifanelekileyo kwinkqubo yokushicilela umbala.
Uluhlu olutsha lwe-X-Rite lwe-500 yaseTshayina i-spectrodensitometer ithatha iteknoloji yemveliso ye-spectral ephuculweyo ukuze ibonelele nge-spectrodensitometer ephathekayo ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuchaneka.
DRK118B ephathekayo 20/60/85 Iglosi yemitha
I-DRK118B luhlobo olutsha lomvavanyi okrelekrele oluchanekileyo oluchanekileyo oluthi inkampani yethu iphande kwaye iphuhlise ngokuhambelana nemigangatho yesizwe efanelekileyo kwaye yamkele iikhonsepthi zoyilo lomatshini kunye neteknoloji yokucubungula ikhompyuter ngoyilo olunenkathalo nolufanelekileyo.
DRK118A i-engile enye yeglosi yemitha
Imitha yeglosi yesipili isetyenziselwa ukulinganisa iglosi yeglosi yepeyinti, iphepha, iplastiki, ifenitshala yomthi, iiseramikhi, ibhastile, i-inki, ialluminiyam ialloy kunye ne-aluminium oxide umphezulu kunye nezinye iimveliso ezisicaba.
I-stroboscope ikwabizwa ngokuba yi-stroboscope okanye i-tachometer.I-stroboscope ngokwayo inokukhupha ukukhanya okufutshane kwaye rhoqo.Ityhubhu yedijithali ibonisa inani lokudanyaza ngomzuzu ngexesha langempela.Incinci ngobukhulu, ilula ngobunzima, ithambile ekukhanyeni, inde kubomi besibane, ilula kwaye ilungele ukusebenza.
DRK102 Ukutshaja okuphathekayo Stroboscope
I-DRK102 i-stroboscope ephathekayo etshajwayo, umenzi we-stroboscope ophathwayo, ixabiso le-stroboscope eliphathwayo elihlawulekayo, elisetyenziswe ku: ukubhaqwa kwezinto ezihamba ngesantya esiphezulu, ukulunywa kwegiya kunye nokutshintsha!